एडोब इलस्ट्रेटरमा एक चरणमा कसरी लोगो वेक्टरिct गर्ने क्रिएटिव अनलाइन
जब हामी एक ब्रान्ड लोगो सिर्जना गर्दछौं यो भेक्टर संस्करण राख्न राम्रो छ डिजाईन सामान्यतया, लोगोहरू विभिन्न ढाँचा र खाली ठाउँहरूमा लागू गर्नुपर्दछ, र यसलाई एउटा लिफाफामा स्ट्याम्प गर्न समान छैन मार्कीमा भन्दा। यदि हामीसँग बिटम्यापमा लोगो मात्र छ भने हामी जोखिम चलाउँछौं कि यसलाई ठूलो साइजमा प्रयोग गर्दा पिक्सल देखिने छ। यदि यो तपाईंको मामला हो भने तपाईंले पोस्ट पढिरहनुपर्नेछ किनकि म तपाईंलाई भन्दै छु कसरी तपाईं एडोब इलस्ट्रेटरमा एक लोगो भेक्टराइज गर्न सक्नुहुन्छ.
हामी दुईवटा उदाहरणहरू हेर्न जाँदैछौं, हामी एडोब फोटोशपमा डिजाइन गरिएको लोगोको भेक्टर संस्करण सिर्जना गर्नेछौं र कागजमा कोरिएको लोगोको डिजिटल संस्करण।
1 ड्रइ fromबाट इलस्ट्रेटरमा कसरी लोगो वेक्टरि to गर्ने
1.1 नयाँ आर्टबोर्ड र इलस्ट्रेटर सिर्जना गर्नुहोस्
1.2 इलस्ट्रेटरमा छवि ट्रेसि Make बनाउनुहोस्
1.3 तपाइँको लोगोलाई कसरी सम्पादन योग्य बनाउने
1.4 ब्रान्डको नाम थप्नुहोस्
1.5 अर्को विकल्प: कलम उपकरण प्रयोग गर्नुहोस्
2 फोटोशपमा डिजाइन गरिएको लोगो कसरी सशक्त बनाउन
2.1 नयाँ आर्टबोर्ड सिर्जना गर्नुहोस्
2.2 इलस्ट्रेटरमा छवि ट्रेसि Make बनाउनुहोस्
2.3 इलस्ट्रेटरमा लोगो दोषहरू परिमार्जन गर्नुहोस्
2.4 अर्को विकल्प: आकार उपकरण र कलम उपकरण प्रयोग गर्नुहोस्
ड्रइ fromबाट इलस्ट्रेटरमा कसरी लोगो वेक्टरि to गर्ने
नयाँ आर्टबोर्ड र इलस्ट्रेटर सिर्जना गर्नुहोस्
मैले कागजको पानामा प्रतीक कोरें र यसको फोटो लिएँ। हामी जाँदै छौं एक आर्टबोर्ड सिर्जना गर्नुहोस् इलस्ट्रेटरमा, मैले दिएँ A4 आकार र मैले परिवर्तन गरेको छु RGB लाई रंग मोड.
इलस्ट्रेटरमा छवि ट्रेसि Make बनाउनुहोस्
आर्टबोर्डमा फोटो टाँस्नुहोस्, यसलाई चयन गर्नुहोस् र एक "छवि ट्रेसिंग" बनाउनुहोस्। यो उपकरण प्राय: देखिने हुँदैन, तर तपाईं यसलाई विन्डोज> छवि ट्रेसि findमा फेला पार्न सक्नुहुनेछ। तपाईमले देख्न सक्नुहुने रूपमा, यसले तपाईंलाई धेरै विकल्पहरू दिन्छ। त्यहाँ एक छैन जुन सँधै कार्य गर्दछ, त्यसैले तपाईंले प्रयास गर्नुपर्नेछ। लोगोको मामलामा, तिनीहरू प्राय: धेरै राम्ररी काम गर्दछन्: कालो र सेतोमा लोगो, सिल्हूट वा खैरोको छायामा। यस मामला मा, हामी कालो र सेतो लोगो संग रहनेछौं।
तपाइँको लोगोलाई कसरी सम्पादन योग्य बनाउने
एक पटक तपाईंले ट्रेसिंग गरेपछि, तपाईंसँग लोगोको भेक्टर संस्करण हुनेछ। यसलाई सम्पादन गर्नका लागि, हामीले वस्तु ट्याब> विस्तारमा जानु पर्छ र संगै प्रत्यक्ष चयन उपकरण हामी प्रत्येक स्ट्रोक छुन्छौं, मोटाई परिमार्जन गर्न सक्दछौं, रंग परिवर्तन गर्न, भागहरू हटाउन र कुनै पनि पक्ष सुधार गर्न सक्नुहुन्छ जुन हामीलाई लोगोमा विश्वास गर्दैन।
ब्रान्डको नाम थप्नुहोस्
हामी जाँदै छौं तस्विर मुनिको ब्रान्ड नाम थप्नुहोस्। मैले यसका लागि विकल्प रोजेको छु Futura टाइपोग्राफी र मैले उसलाई एउटा दिएँ १०० पोइन्ट साइज। जाँच गर्नुहोस् कि लोगो का सबै तत्वहरु सही पigned्क्तिबद्ध छन्। यदि तपाईंसँग पign्क्तिबद्ध उपकरण दृश्यात्मक छैन भने, तपाईं यसलाई विन्डो ट्याबमा फेला पार्न सक्नुहुन्छ।
अर्को विकल्प: कलम उपकरण प्रयोग गर्नुहोस्
तपाईमले देख्न सक्नुहुने छ, यद्यपि हामी पहिले नै डिजिटल संस्करणको सामना गरिरहेका छौं, यो नोट गर्न जारी छ कि यो एक फ्रिह्यान्ड ड्राइंग हो। यो खराब छैन, वास्तवमा यो शैली पछि खोजी हुन सक्छ। तर यदि तपाईं ती प्रकारका लाइनहरू राख्न चाहनुहुन्न भने, तपाई जहिले पनि हातले ट्रेस गर्न सक्नुहुन्छ. छवि ट्रेसिंग प्रयोग गर्नुहोस् हामीले के गर्यौं आधारको रूपमा, यसलाई धेरै हल्का रंग दिनुहोस् र कलम उपकरण माथिको स्ट्रोक पुन: उत्पादन गर्नुहोस्।
फोटोशपमा डिजाइन गरिएको लोगो कसरी सशक्त बनाउन
यो अन्य उदाहरणमा हामीसँग लोगो छ जुन मैले फोटोशपमा डिजाईन गरेको छु। एडोब फोटोशपको साथ लोगो डिजाइन गर्न नकारात्मक पक्ष यो सरल ग्राफिक्स सफ्टवेयर हो, त्यो हो तपाईं पिक्सल संग काम। लोगोलाई बिटम्यापमा डिजाईन गर्दा, यसले समस्याहरूको समाधान दिन सक्दछ जब हामी यसलाई ठूला सतहहरूमा लागू गर्दछौं।
नयाँ आर्टबोर्ड सिर्जना गर्नुहोस्
हामी जाँदै छौं एक आर्टबोर्ड सिर्जना गर्नुहोस् अघिल्लो (A4 आकार, RGB र mode्ग मोड) को समान सुविधाहरूको साथ हामी गर्छौं इलस्ट्रेटरमा लोगो खोल्नुहोस्।
प्रक्रिया उस्तै हुनेछ। हामी लोगो चयन गर्दछौं र हामी एक चित्र ट्रेसि make बनाउने छौं। यस अवस्थामा विकल्पले उत्तम काम गर्दछ "सिल्हूट्स"जहाँसम्म तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ, लोगोका केहि विवरणहरू जस्तै रंग, हराउनेछ र टाइपोग्राफी बिग्रिन्छ।
इलस्ट्रेटरमा लोगो दोषहरू परिमार्जन गर्नुहोस्
आउनुहोस् वस्तु ट्याब र विस्तार मा क्लिक गर्नुहोस्। प्रत्यक्ष चयन उपकरणको साथ, हामी जाँदै छौं ब्रान्डको नाम हटाउनुहोस् र हामी इलस्ट्रेटरको साथ पाठ थप्न गइरहेका छौं, हामीले यो छनौट गरेका छौं रेलेवे लाइट इटालिक टाइपफेस र हामी तपाईंलाई एक दिन जाँदैछौं १०० पोइन्ट साइज। लोगोका सबै तत्वहरू राम्रोसँग पंक्तिबद्ध गर्नुहोस् र तपाईं यो तयार हुनुहुन्छ।
अर्को विकल्प: आकार उपकरण र कलम उपकरण प्रयोग गर्नुहोस्
हामीले पहिलो लोगोसँग गरे झैं, हामी प्रोग्रामको उपकरणहरूसहित नयाँ संस्करण सिर्जना गर्न सक्छौं। हिसाबको लागि पहाडहरू र इलिप्स उपकरणहरू ट्रेस गर्न कलम उपकरण प्रयोग गर्नुहोस्।
यदि तपाईंलाई यो ट्यूटोरियल मन पर्यो भने कसरी एडोब इलस्ट्रेटरमा लोगो सct्केत गर्ने र तपाईं अधिक जान्न चाहानुहुन्छ बारेमा कार्यक्रममा छविहरू कसरी सशक्त पार्ने पोस्ट छोड्नुहोस् जुन मैले तपाईंलाई लिंक गरेको छु।
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » डिजाइन उपकरणहरू » एडोब इलस्ट्रेटरमा कसरी लोगो सct्केत गर्ने